Nhau. Mazita ekupedzisira kubva kuna Kristin Hannah naGlenn Cooper. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Fantasy, Novela, Nhema nhema, Romance novel
Nhasi ndinoongorora iyo nhau kubva kune vaviri vakakurumbira venyika vanyori vekuAmerica vane mazita matsva mumusika wekutsikisa.
Kubva kuCalifornia Kristin hannah Tine zvinyorwa zviviri zvitsva zvakaburitswa gore rino. Bindu rechando y Zvidhoma zvinotamba. Uye New Yorker Glenn cooper, nyanzvi mu thrillers naka, inotanga na Kutongwa imwe trilogy mushure meiyo Raibhurari yevakafa. Zviuru zvevateveri vake mune mhanza.
1.1 Bindu rechando
1.2 Zvidhoma zvinotamba
Hana akaberekerwa mukati 1960 kumaodzanyemba kweCalifornia. Akadzidza zvemutemo, asi semhedzisiro yekuburitswa muna 1991 yenyaya yake yekutanga, Chanza cheDenga, akava munyori ane hunyanzvi. Akaburitsa anopfuura makumi maviri enganonyorwa muUnited States, kusanganisira Ngirozi Inodonha (2000), Firefly nzira (2008), Chokwadi Colors (2009) uye Nguva yechando Bindu (2010). Yakakunda mukurumbira kwakawanda, kusanganisira Iyo Golden Moyo, Iyo Maggie, Iyo National Reader's Sarudzo, pamwe neiyo 2015 Goodreads Mubairo weYakanakisisa Nhoroondo Fiction Novel ye The Nightingale.
Hana anodzokera ku Hondo Yenyika Yechipiri, iyo yaakatobata nayo mune yakagamuchirwa The Nightingale, neichi chitsva nhau seta zvakare kaviri.
USSR, 1941. ari Kukomba kweLeningrad inodzivirira chero mukana wekubatsirwa kubva kuhondo nechando. Asi kune vamwe vakadzi vane shungu uye vanokwanisa chero chinhu kuponesa vana vavo uye ivo pachavo kubva kunjodzi.
United States, 2000. Anya whitson, akaratidzirwa nekurasikirwa uye akarohwa nemakore, iye pakupedzisira anokwanisa kubata vanasikana vake, Nina naMeredith, kuna ani achada nyaya yerussian yakanaka uye yechidiki russian uyo aigara muLeningrad kare kare. Vese hanzvadzi vachasangana ne chakavanzika chakavanzika izvo zvichazungunusa nheyo dzemhuri yako uye zvinoshandura maonero ehupenyu hwako.
Zhizha 1974. Kate mularkey Iye haasi iye anonyanya kufarirwa mudzidzi pachikoro chake chesekondari, asi ipapo iye aripo, anotamira munharaunda yake uye anoda kushamwaridzana naye. Tully hart Iye akanaka, akangwara uye ane chinzvimbo, kusiyana naKate, anoenda asingaonekwe uye ane mhuri ine rudo asi inomunyadzisa pese pese Tully zvese zvinofadza uye zvakavanzika, asi iye ane chakavanzika chiri kumubvarura. Vaviri vacho vanoparadzaniswa uye vanoita chibvumirano chekuve iyo shamwari dzepamoyo zvachose. Kwemakore makumi matatu vachabatsirana kusvikira kutengeswa kuvaparadzanisa uye ivo vanofanirwa kukunda muyedzo wakaomesesa wehukama hwavo.
Cooper haidi mharidzo yakawanda kune zviuru zvevaverengi vakasungwa Raibhurari yevakafa nemazita ayo anotevera, Bhuku remweya y Kupera kwevanyori. Basa rake rekunyora rakatanga mu2006 uye kunze kwake akaburitsawo Kiyi yemagumo, Dombo remoto y Chiratidzo chadhiyabhorosi. Zvakare nyaya Zuva rekupedzisira y Iyo nguva yezvokwadi, iyo yaenda yakananga mubook. Iye zvino anotipa isu ne trilogy nyowani izvo zvinotanga neizvi Kutongwa, rakabudiswa pakati pemwedzi wapfuura.
John musasa ndiye musoro wezvekuchengetedza paMAC, rabhoritari yakavanda uko chirongwa cheHercules chinogadzirwa, pane iyo subatomic tsvakurudzo. Emily Loughty inyanzvi yefizikisi naiye John ane inopfuura yehukama hwehukama uye ndiani anotarisira iyo yakavakirwa particle collider.
Asi Emily anonyangarika zvinoshamisa mushure mekukanganisa bvunzo kuyedza. Munzvimbo maaive, murume anoita seanotiza chivakwa. Kana vachiongorora, vanoona kuti iye muurayi akaurawa uye akaurayiwa muna ... 1949. Tsananguro chete ndeyekuti a magnetic corridor pakati penyika yedu uye yakafanana chokwadi. Asi chokwadi ichi chinogarisa nyika inogarwa nematsotsi nemhando dzose dzekutongwa nekusingaperi.
Kuti adzore Emily, John achasarudza kuenda pasi uko pasina mupenyu kana murume akanaka akamboenda ndokutarisana neakasviba mavara munhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Nhau. Mazita ekupedzisira kubva kuna Kristin Hannah naGlenn Cooper.
20 Mitsara yevanyori vekare yenguva dzino